Shir looga hadlayo Mustaqbalka Somalia kadib ka bixitaanka AMISOM oo ka socda Muqdisho. – Hornafrik Media Network
Kulan xasaasi ah oo maanta ka dhacaya Villa Somalia
‘Horrific pattern’: Amnesty says 106 killed in Iran protests
Cumar Filish oo soo saaray amar ku socda qoysas degan dhul dan guud ah
Maxaa ka jira in xubin sare oo Shabaab ah lagu dilay Duqeyn ka dhacday Sh/Hoose?
In ka badan 100 ruux oo ku geeriyootay dibad baxyada dalka Iran.
Shir looga hadlayo Mustaqbalka Somalia kadib ka bixitaanka AMISOM oo ka socda Muqdisho.
By HornAfrik	 On Jul 25, 2017
Shir u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo AMISOM ayaa shalay ka furmay xarunta Xalane, kaasoo socon doona muddo afar maalin, shirkan ayaa waxaa loogu gogol xaarayaa sidii Ciidamada Soomaaliya loogu diyaarin lahaa in mas’uuliyada ammaanka dalka kala wareegaan AMISOM, iyo qaababka loo wajahayo xilliga kala guurka ee ay AMISOM dalka ka baxeyso.
Shirkan ayaa waxaa ka qeyb galaya Ra’iisul wasaare kuxigeenka Soomaaliya, Wasiirka Gaashaandhigga, Taliyeyaasha ciidamada iyo saraakiisha, Madaxa Midowga Afrika ee Soomaaliya, Saraakiisha sar sare ee AMISOM, saraakiil ciidan ka socota Midowga Yurub, UK iyo Mareykanka.
Ergeyga Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya ahna Madaxa AMISOM, Amb. Francisco Madeira ayaa sheegay in shirkan ahmiyadiisu tahay sida ugu haboon ee go’aamada iyo talooyinka loo gaari karo, hadii ay yihiin AMISOM iyo Taliska Ciidamada Xoogga dalka.
Bishii April ee sanadkan Madaxda Soomaalida ayaa gaaray heshiis ku saabsan dhinaca ammaanka, kaasoo dhigaya dhismaha ciidamada qaranka ee AMISOM kala wareegaya Ammaanka, marka la gaaro sanadka 2018.
Amb. Francisco Madiera ayaa sheegay in Ciidamada Ammaanka Soomaaliya ay isku furi doonaan waddooyinka go’an, isla markaana ay sugi doonaan ammanka doorashada sanadka 2021.
Waxaa uu sheegay in Ciidamada Soomaalida loo baahan yahay in la qalabeeyo, lana siiyo hubka ay u baahan yihiin, si ay ammaanka ula wareegaan.
Kulankan ayaa inta uu socdo waxaa shir guddoomin doona Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya C/rashiid C/llaahi Maxamed iyo Taliyaha Ciidamada AMISOM Jen. Cusmaan Nuur Subagle.
Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Soomaaliya Mahad Maxamed Guuleed ayaa bogaadiyay taageerada AMISOM u fidinayaan dadka iyo dowladda Soomaaliya.
“Waxaan marqaati ka nahay walaalaheena Afrika sida ay uga jawaabeen baaqeena ahaa xilligii mugdiga aan ku jirnay, sida ay noo caawiyeen”ayuu yiri Ra’iisul wasaare kuxigeenka.
Ra’iisul wasaare kuxigeenka ayaa sheegay inay ku qanacsan yihiin inuu bilowdo shir u dhaxeeya dowladda Federaalka iyo AMISOM, isagoo xusay inuu aas aas u noqon doono in lagu guuleysto xilliga kala guurka ah oo dhamaantood ay dan guud ugu jirto
Inta uu socdo kulankan ayaa waxaa loogu hadli doonaa heshiiskii qaab dhismeedka Amniga ee ay bishii April gaareen Madaxda Soomaaliya iyo fulinta qodobada heshiiskaas ku qornaa ee ku saabsanaa dhismaha ciidamada ka socda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe, si ay si tartiib tartiib awood ugu yeeshaan qaadista mas’uuliyada ammaanka dalka.
Somaliland oo u magacawday Ergay Gaar ah Wadaxaajoodka kala dhaxeeya Somalia.
Safiirka Somalia ee UN-ka oo aan haysan Xasaanad Diblomaasideed, Ogoow Sababta.